11 Naizvozvo ndinobvunza kuti, Mwari akaramba vanhu vake here?+ Izvozvo ngazvirege kumboitika! Nokuti iniwo ndiri muIsraeri,+ wokuvana vaAbrahamu, wedzinza raBhenjamini.+ 2 Mwari haana kuramba vanhu vake, vaakatanga kuziva.+ Chokwadi, hamuzivi here zvinotaura Rugwaro pamusoro paEriya, zvaanoteterera kuna Mwari pamusoro paIsraeri?+ 3 Achiti, “Jehovha, ivo vakauraya vaprofita venyu, vakaputsa atari dzenyu, ini ndoga ndini ndasara, uye vari kutsvaka mweya wangu.”+ 4 Asi, shoko raMwari+ rinoti kudini kwaari? Rinoti, “Ndasiya varume zviuru zvinomwe nokuda kwangu, varume vasina kupfugamira Bhaari.”+ 5 Zvino, saizvozvo, pamwaka unowo vakasara+ vavapo maererano nokusarudza+ kwakaitwa kuti kuvepo nomutsa usina kukodzera kuwanwa. 6 Zvino kana zviri maererano nomutsa usina kukodzera kuwanwa,+ hazvisisirizve nokuda kwemabasa;+ kudai zvisina kudaro, mutsa usina kukodzera kuwanwa hawaizovazve mutsa usina kukodzera kuwanwa.+ 7 Saka toti kudini? Israeri haana kuwana chinhu chaicho chaari kutsvaka nomwoyo wose,+ asi vaya vakasarudzwa+ vakachiwana. Vamwe vose vakagomara pfungwa dzavo;+ 8 sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Mwari akaita kuti vabatwe nehope huru,+ akavapa maziso kuti varege kuona uye nzeve kuti varege kunzwa, kusvikira nhasi.”+ 9 Uyewo, Dhavhidhi anoti: “Tafura yavo yezvokudya ngaive musungo kwavari uye chiteyeso, chinhu chinogumbura uye chinhu chokutsiva nacho;+ 10 maziso avo ngaave nerima kuti arege kuona, uye vagare vachikotamisa misana yavo.”+ 11 Naizvozvo ndinobvunza kuti, Vakagumburwa zvokuti vakawa+ zvachose here? Izvozvo ngazvirege kumboitika! Asi vanhu vemamwe marudzi+ vanowana ruponeso nokuda kwokudarika+ kwavo, kuti vaite kuti vave negodo.+ 12 Zvino kana kudarika kwavo kuchireva pfuma kunyika, uye kuderera kwavo kuchireva pfuma kuvanhu vemamwe marudzi,+ nhamba yavo izere+ ichareva zvizhinji kwazvo sei! 13 Zvino ndinotaura kwamuri imi muri vanhu vemamwe marudzi. Ini chokwadi zvandiri muapostora+ kune mamwe marudzi,+ ndinokudza+ ushumiri+ hwangu, 14 kana ndingakwanisa kuita kuti vanhu vokwangu vave negodo ndoponesa+ vamwe pakati pavo.+ 15 Nokuti kana kuraswa kwavo+ kuchireva kuyananiswa+ kwenyika, kugamuchirwa kwavo kucharevei kunze kwoupenyu kubva kune vakafa? 16 Uyezve, kana rutivi runotorwa sezvibereko zvokutanga+ ruri rutsvene, mukanyiwa wose mutsvenewo; uye kana mudzi uri mutsvene,+ mapazi acho matsvenewo. 17 Zvisinei, kana mamwe emapazi acho akatyorwa akabviswa, asi iwe kunyange zvazvo uri muorivhi womusango, wakanamatidzwa pakati pawo+ ukava nomugove pamudzi une mafuta+ womuorivhi,+ 18 rega kupembera nomufaro pamusoro pemapazi acho. Asi, kana ukapembera nomufaro pamusoro pawo,+ yeuka kuti hausi iwe unotakura mudzi,+ asi mudzi ndiwo unokutakura.+ 19 Saka, uchati: “Mapazi akatyorwa akabviswa+ kuti ini ndinamatidzwe.”+ 20 Zvakanaka! Iwo akatyorwa akabviswa nokuti akanga asina kutenda,+ asi iwe wakamira nokutenda.+ Rega kuzvikudza,+ asi itya.+ 21 Nokuti kana Mwari asina kurega mapazi epo, haazokuregiwo.+ 22 Naizvozvo, onai mutsa waMwari+ uye kuomesa zvinhu kwaanoita.+ Anoomesera kwazvo vaya vakawa,+ asi Mwari anoitira iwe mutsa, chero bedzi uchiramba+ uri mumutsa wake; kana ukasadaro, newewo uchatemwa.+ 23 Ivowo, kana vakarega kuramba vari mukushayiwa kwavo kutenda, vachanamatidzwa;+ nokuti Mwari anokwanisa kuvanamatidza zvakare. 24 Nokuti kana iwe wakatemwa pamuorivhi worudzi rwomusango ukanamatidzwa+ pamuorivhi womumunda nenzira yakasiyana nokusikwa kwakaitwa zvinhu, aya epo achanamatidzwa zvikuru sei nomuorivhi wawo chaiwo!+ 25 Nokuti handidi kuti imi, hama, murege kuziva chakavanzika chitsvene ichi,+ kuti murege kuva vakangwara mumaziso enyu, chokuti: vamwe vaIsraeri vakagomara pfungwa+ kusvikira nhamba yakazara+ yevanhu vemamwe marudzi yapinda,+ 26 uye vaIsraeri vose+ vachaponeswa saizvozvi. Sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Mununuri achabva muZiyoni+ ozobvisa tsika dzokusada Mwari kuna Jakobho.+ 27 Iyi ndiyo sungano yangu navo,+ pandinobvisa zvivi zvavo.”+ 28 Chokwadi, kana tichitaura nezvemashoko akanaka ivo vavengi vaMwari nokuda kwenyu,+ asi kana tichitaura nezvokusarudza kwaMwari ivo vanodiwa nokuda kwemadzitateguru avo.+ 29 Nokuti zvipo nokudana kwaMwari hazvisi zvinhu zvaanozodemba.+ 30 Nokuti kungofanana nemi maimbova vasingateereri+ Mwari, asi zvino makanzwirwa ngoni+ nemhosva yokusateerera kwavo,+ 31 naizvozvowo ava zvino vakava vasingateereri, ngoni dzichibva dzaratidzirwa kwamuri,+ kuti zvino ivowo varatidzirwe ngoni. 32 Nokuti Mwari akavavharira vose pamwe chete mukusateerera,+ kuti avaratidzire vose ngoni.+ 33 Haiwa, pfuma yaMwari+ nouchenjeri+ nezivo+ zvakadzama sei! Kutonga+ kwake hakugoni kuongororwa sei uye nzira dzake hadzigoni kurondwa sei! 34 Nokuti “ndiani akasvika pakuziva pfungwa dzaJehovha,+ kana kuti ndiani akava munhu anomupa mazano?”+ 35 Kana kuti, “Ndiani akatanga kumupa chinhu, kuti iye achidzorerwezve?”+ 36 Nokuti zvinhu zvose zvinobva kwaari uye zviripo naye uye ndezvake.+ Kukudzwa ngakuve kwaari nokusingaperi.+ Ameni.